Kedu ihe rd pụtara na Shimano? - Shimano
Isi > Shimano > Shimano xtr onyinyo gbakwunyere - ihe ngwọta na
Shimano xtr onyinyo gbakwunyere - ihe ngwọta na
Kedu ihe rd pụtara na Shimano?
KPỌSỌSARRUNT Ugwu DARAILLEUR |SHIMANOIgwe kwụ otu ebe.
Ha na-eji otu igbe ahụ ejiri mee ihe maka mgbanwe mana o doro anya na ihe ị nwetara ebe a bụ ozi gbasara atọ derailleurs ha na-enye ụgbọala ọhụrụ a, nke m nwere ebe a M9100 SGS 12-speed, nke a bụ naanị nke ekwesịrị iji na katrij 10-51T. Have nwere RD-M9100-GS, oghere onu.
Nke a bụ ọsọ 11 ma ọ bụ 12 maka kaseti 10-45T. N'ikpeazụ ala, M9120-SGS, nke a bụ maka ọsọ 12 mana maka draịva 2x. Dịka XTR ndị ọzọ niile, a na-eme ihe ndị a na Japan ma ebe a ị nwere ike ịhụ koodu ngwaahịa - RDM9100SGS N'ime igbe ahụ, ị ​​gaghị enweta ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Akwụkwọ ntuziaka nke derailleur azụ, nke na-abaghị uru, anaghị enye gị ọtụtụ ihe. Aha nke akụkụ na ọrụ nke ipigide, ọ dịghị ihe ọzọ. Ọ na-abụkarị na ha nwere ihe mkpuchi a iji jide ha ọnụ ma ọ dịghị iche.
Na ihe bụ mbụ m echiche? Nwoke, nke ahụ na-adị mfe ma na-egosi ịdị mma! Oru oru na ihe omuma. Biko mara, nke a bụ ihe mbụ XTR derailleur m enweghị ike iji tụnyere ihe ọ bụla. Ọdịdị ọkụ ahụ ga-esite n'eziokwu na ejiri carbon rụọ ụfọdụ akụkụ, maa akụkụ mpụga nke ụlọ ahụ bụ nke carbon.
Mana tupu m rute na nke ahụ, lee anya mbụ, ị nwere ike ịhụ lever maka ipigide ebe a. Ipigide, ọ na-azọrọ na ọ ga-arụ ọrụ ka mma karịa na mbụ, ma ọ bụrụ na ị na-ele anya na nke a cover ebe a, ịghasa nọmba otu, abụọ na atọ, ị nwekwara mkpuchi ebe a otú i nwere ike ịgbanwe erughị ala nke a ipigide. Ọ bụrụ na ị maghị etu esi eme nke a, lelee edemede m banyere otu esi echekwa ma mezie ipigide a.
Ga - ahụ ụdị mbelata niile nke pulleys. Ndị a na-eji ihe nkedo akara, ha abụọ. Ha anaghị eji profaịlụ dị warara na nke ọ bụla n'ime egwuregwu ndị ahụ, mana ndị a raara nye ọrụ ha.
Nke mbu, jockey kacha elu, ị na-ahụ akụ ebe a, akụ nduzi. Ọ na-ekwu Shimano ebe a, ọ dịghị ihe ọzọ, mana ebe a ị hụrụ G-PULLEY, ma ọ bụ ọrụ ndu, ma ọ bụrụ na ị lelee ala, ị ga-ahụ T-PULLEY, nke pụtara ntụgharị esemokwu, yabụ ndị a bụ jockeys raara onwe ha nye maka ọnọdụ ọ bụla, ee, nke ahụ bụ SGS ma ọ bụ ogologo onu. Ọ bụrụ n ’ileba anya n’ime ya, ị ga - ahụ koodu ngwaahịa, nke bụ RD-M9100.
Ojiji nke ezé ezé iri na atọ bụkwa ihe ọhụrụ. Ugboro ogologo nke nwere onu ogugu ogologo oge kwesiri idi nke a. Ihe ọzọ m chọrọ igosipụta bụ ahịrị ezé 51 nke anụ ọhịa, nke kachasị na katrij ha.
Ọfọn, nke ahụ pụtara inwe ike ịhazigharị oghere B-Gap ebe a, dị ka SRAM Eagle si enye ngwa ọrụ a. Na mgbe m tinyere nke ahụ na wiilị jockey m, ị lelee ahịrị si SRAM na ahịrị si Shimano, ị ga - ahụ etu B-ọdịiche dị na mberede dịka ihe hà nhatanha maka Shimano, n’okpuru 15 milimita, mgbe ọ nọ gara aga ha B-spacing dị mkpụmkpụ karịa. Na mgbe anyị na-ekwu maka SRAM, enwere m Eagle derailleur ebe a.
Eeh, nke ahụ bụ GX, mana e wuru ya otu ụzọ ahụ siri rụọ XO1 na XX1 n'ụzọ ahụ, ka anyị lebakwuo anya n 'ọnụ ụlọ a naanị n'ihi na ọ bụụrụ m ndọda. Ma ọ bụrụ na ị lelee akụkụ nke onu ahụ, na XT ọhụrụ ma ọ bụ na m nwere 93 millimeters n'etiti wiil abụọ ahụ na-akwado ya na nkwụsịtụ dị n'etiti isi ihe na axis nke wiil nkwado dị elu bụ 45 millimeters. Ugo dị anya bụ 92 mm, yabụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ dị n'etiti wiil nkwado abụọ na mmebi dị n'etiti isi okwu na wiil nkwado elu
SRAM n'ezie na-eji ntakịrị ihe dechapụ ebe a. Dịka ị pụrụ ịhụ, mmebi ahụ bụ ihe dịka millimita 52, nke dị 6-7 millimeters karịa. Ya mere ngịga ụlọ ọrụ abụọ ahụ emebere maka cassettes ndị a bụ 10-50T ma ọ bụ 10-50T ka ha dịka otu, n’agbanyeghi otu ị si lee ya anya, ọ dịka, na yiri nnabata a, ọ dịkwa otu ụkwụ ọzụzụ a.
Enwere naanị otu ihe ọzọ m na-ahụ ebe a na XTR bụ nke ekwuru n'ezie na nkọwapụta ahụ: ị hụrụ na ụdị rọba, nke dị ka rọba nke na-adịghị na Ugo. Naanị ihe na - egbochi agbụ bụ ịpị aka n'ime ụlọ nnupụisi mgbe agbụ ahụ dị na eze cassette 10 ma ọ bụ 12. Na ihe ikpeazu nke na-ato m uto nke ukwuu.
Ọ bụrụ na i lee onu ugo a, ị ga-ahụ etu o si kwụrụ ọtọ, wiilị ọzụzụ abụọ a yirita onwe ha, onweghị akụkụ n’etiti ha abụọ. Ihe ọ bụla na-abụghị nke a na-egosi ụfọdụ ụdị mmebi mebiri emebi. Mana ọ bụrụ na ị na-elele XTR anya, ka anyị leba anya na onu, azụ azụ n'ime ebe a, lee anya na nke a, ọ dị ka ọ gbagọọla! Ee ee, ị nwere ọdịiche ebe a, yabụ emela naanị na ụkwụ ụkwụ jockey dị n'elu na ala adịghị n'otu akara ahụ, nke a yiri ka ọ ga-ehulata ntakịrị ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ, pụọ na nkwupụta, kamakwa mgbe m tụọ aka a na igwefoto a, ị ga-ahụ na wiil nkwado dị ala nwere obere akụkụ ebe a, yana nke ọzọ, ọ bụrụ na m jidere nke a nke ọma n'akụkụ oghere igwefoto, ị ga-ahụ ka wiil nkwado dị elu na-esi n'ebe anyị nọ pụọ.
Akpọrọ m onye na-ebubata ngwaahịa ma ha tụrụ aro na ndị ahịa niile ha nwere ugbu a dị ka nke a, echere m na nke a abụghị ntụpọ kama ọ bụ akụkụ nke imepụta ọhụụ. Na ọnụ ọgụgụ, nke ahụ bụ gram 243 na gram 237 dị na nkọwa. Ugo XX1, nke ga-abụ akara ntanye SRAM, bụ 265g, yabụ XTR na-echekwa ihe dịka gram 20 ruo 23 Have hụla otu dị ka nke a mbụ? Ọ bụrụ otu a, ị hụrụ n ’ọpụpụ a ma ọ bụ dechapụ n’etiti wiil abụọ ahụ na-akwado ya? Ga-amasị m na-anụ gị.
Maka nke m, nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịwụnye nke a na-esote ihe ọsọ ọsọ 12 m XTR ma hụ otu esi arụ ọrụ na cassette SRAM Eagle 10-50T. Ma ugbu a, nke a bụ njedebe nke obere nyocha m na ngalaba ama n'okpuru, ọ bụrụ na ịchọta na ọ bara uru, echefula inwe mmasị na ịdenye aha, ruo oge ọzọ m ga-ahụ ndị na-agba gị n'okporo ụzọ. Chei ụmụ okorobịa, nwee nụ!
Kedu ihe akụrụngwa XT?
The DeoreXTbụ otu igwe eji agba igwe si na ndị ọrụ Japan bụ Shimano. Onye na-emepụta ya na-enye ya dị ka otu igwe igwe igwe ugwu dị elu nke na-arụ ọrụ dum na usoro mbanye na igwe kwụ otu ebe yana breeki na hubs.
Hey ọ bụ m gị Flo si BIKE24
Ọfọn, ọ bara uru ịnwale. Chei, Ano m Flo si BIKE24. Taa, anyị wuru ihe ọhụrụ na igwe kwụ otu ebe anyị.
Kedu ihe nke ahụ bụ, anyị ga-agwa gị n'ụlọ nkwakọba ihe anyị. Dị ka anyị kwere gị nkwa na ebe ahụ n'okporo ụzọ, enwere ihe pụrụ iche, ihe ọhụrụ. Nke ahụ sitere na Shimano, laghachi na 80s na XT, e mepụtara ìgwè igwe kwụ otu ugwu nke mbụ.
Ugbu a na 2019 XT ga - adịkwa ka otu ọsọ ọsọ 12. Kwesịrị ekwesị maka nwanne ya nwanyị, XTR. Ee, anyị ga-achọ ịnye gị obere uto akụkụ niile.
Ka na-amalite na crank. Ma n'ezie na crank na-agụnye ihe yinye. Ihe nkedo ihe eji eme ihe puru iche na-enye ohere ka ejide ya na elu ya ma ghapu ya na ala.
weightgba ígwè buru oke ibu
Nke a bụ ihe kachasị mkpa mgbe ị na - eji draịva ọsọ - gbaa mbọ hụ na agbụ ahụ agaghị efu. Dị ka ya na nnukwu nwanne ya - XTR - ọ bụ ihe mgbanaka kwụ ọtọ. Uzo nha nha maka uzo uzo 1 sitere na 28 - 36.
Site na sistemụ ụzọ 2 ị nwere nhọrọ nke 36 na ezé 26. Dị ka ọ dị na mbụ, a na-eme ka crank ahụ na imewe Hollowtech. Anyi n’enwe kwa mbuli na mbipute na adighi nma.
Ka anyị bịaruo cassette ahụ. Cassette nwere Shimano Hyperglide teknụzụ, nke na-eme ka ịgbanwee mgbanwe zuru oke na nke dị jụụ na-agba ọsọ. Dị ka ị na-ejikarị si Shimano.
Ejiri aluminom mee elu abụọ ahụ dị elu, naanị iji chekwaa obere ibu. Ihe nkedo onwe ha di na aluminom -Spider etinyegoro na nke ohuru Micro-Spline freehub. Akara casset dị na 10-45 maka obere gia na 10-51 maka nke kachasị ukwuu.
Ka anyị rute n'agbụ ahụ. The yinye bụ n'ezie obi nke ọhụrụ XT drivetrain. Ke adianade do, a pụrụ iche yinye 12-ọsọ yinye nke ukwuu jụụ ma kpọmkwem mgbanwe.
The yinye nwere chrome-plated n'ime njikọ iji melite anwụ ngwa ngwa. Dị ka XTR, e nwere nsụgharị abụọ dị iche iche nke azụ azụ azụ. Dabere na ikike nke 1 ma ọ bụ 2-ọsọ usoro na 10-51- ma ọ bụ 10-45-ọsọ cassette.
Maka ịnyagharị na ịnyagharị nkasi obi ọzọ, Shimano awụnyerela ntuziaka iri na atọ na esemokwu, na-adọkpụ ahịhịa, yana akwa rọba. Onyinye Shad RD + na-eme ka o doo anya na a na-edozi azụ azụ azụ mgbe niile ọbụna na ala siri ike. Sere onye na-agbanwegharị ihe na na a na-ekpochi azụ azụ azụ.
Ọpụrụiche nke ntụgharị ntụgharị bụ na ọ nwere I-Spec EV ụdị breeki lever iji nye 14 mm nhọrọ ndozi na mkpịsị aka gị ogologo. Na ọdịnala na Shimano nwekwara nhọrọ nke ịhapụ ụzọ 2 nke azụ azụ na ọtụtụ mwepụ nke ma Lever. Yabụ ị nwere ike ịkpalite ọtụtụ.
Gbanwe usoro ahụ site na iji otu ihe tinye ya. Shimano breeki. Ozugbo i tinyere ya, ikekwe ị gaghị ewepụ ya ọzọ.
Ihe ọhụrụ XT dị na nsụgharị 2-piston na 4-piston. Na otu aka maka cross-mba na aka nke ọzọ maka enduro na nzọ ụkwụ. Ihe pụrụ iche nke lever ahụ bụ na a na-akwado ya na 2 isi.
Nke a na-abawanye rigidity na elu arụmọrụ. Na nkenke: arụmọrụ dị elu, nzaghachi ngwa ngwa na njem na-abaghị uru. Breeki breeki bụkwa ihe ọhụrụ XT.
Site na teknụzụ ICE Freeza. Nke a pụtara na isi ihe aluminom na-agbanye na akwa abụọ nke igwe anaghị agba nchara ma nye ya ntanye dị jụụ. N'ihi ya, a na-ekpo ọkụ ọkụ n'egbughị oge ma na-enyekwu braking ike.
O doro anya na ịkọwa na Shimano agbakwunyewo ụlọ ọrụ na wiil zuru ezu. Ngwurugwu zuru ezu dị dị ka ụdị XC nke nwere mkpịsị aka 24 mm n'obosara na 28 kwụ ọtọ na azụ na enduro rim na-abịa na 30 mm n'obosara na 28 J-ehulata spokes. Ihe niile dị ọzọ dị ka mmụba na nkwalite na-enweghị mmelite na na 27.5 'na 29' n'otu n'otu.
Anyị nọ na njedebe nke. Anyị ka nwere ọkacha mmasị oge niile ebe a. XT pedal.
N'ezie, ha enweghị ike ibibi. Ha nwetakwara obere nhazi. Nke ahụ bụ XT ọhụrụ site na Shimano.
Echere m na isiokwu ahụ masịrị gị. Obi ga-adị m ụtọ ma ọ bụrụ na ị kwuo maka ma 12-ọsọ XT bụ mmelite bara uru maka gị. Ma ọ bụghị, ekele maka ikiri.
arụrụ n'ụlọ egwuregwu ọ drinkụ .ụ
Flo gị si Bike24. Ka ọ dị.
Kedu ihe bụ cassettes Shimano HG?
HGPinion. Ihe nkedo HYPERGLIDE pụrụ iche nwere profaịlụ ezé pụrụ iche yana ihe enyemaka na-arịgoro elu nke na-ebuli ndu ndu mgbe ị na-agbanwe. Nke a na-enyere ọrụ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ.
Isiokwu a ga - enyere gị aka ịmata ụdị cassette ma ọ bụ freewheel ị nwere yana ngwa ọrụ ịchọrọ ịwepụ ya. Ndewo, Calvin Jones ebe a na Park Tool Company. Anyị ga-eleba anya na ọdịiche dị n’etiti freewheels na katrij sistemụ yana ọtụtụ ọdịiche nke ọ bụla.
Anyị ga-enyere gị aka ikpebi ụdị ngwaọrụ ị ga-ewepụ ma wụnye. Ozugbo inwetara ozi a, anyị ga - eduzi gị gaa etu ị ga - esi dee maka sistemụ gị. Ọ bụrụ na ị maraworị na ị nwere usoro freewheel na ihe niile ị ga - eme bụ ịchọpụta ngwá ọrụ ị ga - eji, jiri oge egosiri.
Ma ọ bụghị ya, anyị ga-amalite na ọdịiche dị n'etiti freewheels na cassettes. Na igwe kwụ otu ebe ọ nwere ike isiri gị ike ịma ma ị nwere cassette ma ọ bụ freewheel, mana nke a bụ ụzọ kachasị mfe iji gaa. Mgbe i wepụsịrị ụkwụ azụ ahụ site na igwe kwụ otu ebe, tụgharịa sprockets ahụ n’azụ.
Na cassette, ihe njide ihe eji arụ ọrụ na pinion anaghị agbagharị n'ihi na sprockets na-atụgharị na elekere. Ọ dị mfe zuru ezu, mana ọ bụrụ na ịmara ndị njide ihe iji chọọ. Anyị na-achọ ihe kachasị dị n’ime ndị na - ejide ihe, anyụike na mkpọchi abụghị akụkụ nke cassette ma ọ bụ eriri igwe free; onye na-ejide ihe eji arụ ọrụ n’ime ime bụ ihe kacha dịrị ha mma.
Ihe mgbanaka a nwere ọtụtụ ndị na-ejide ngwá ọrụ, ma n'ime ime bụ wedges iri na abụọ a. Ihe njide ihe a anaghị emegharị mgbe anyị gbanwere ihe ndị na - eme, nke mere ka ọ bụrụ sistemụ efu. Ihe kachasị dị n'ime ebe a nwere ọkwa anọ.
Ọ naghị agagharị mgbe ntụtụ ahụ tụgharịrị azụ, yabụ na anyị nwere igwe kwụ otu ebe ọzọ. Ngwá ọrụ njikọ anyị kachasị mma dị ebe a na mgbanaka mkpọchi a. Mgbe anyị na-atụgharị ihe ndị na-ekwo ekwo, ihe mgbakwunye ngwa ọrụ na-agbagharị, na-eme ka usoro cassette a.
Enweghị mkpọchi mkpọchi a na - ahụ anya na azụ azụ ndị a - mana lelee anya na axle ma ị ga - ahụ ngwa ọrụ. Ihe kwesịrị ekwesị na-agbagharị, na-eme nke a na cassette. Ugbu a na ịmara ihe ị nwere, ka anyị leba anya n'otú cassettes na freewheel system si arụ ọrụ, na otu esi ahọta ngwaọrụ kwesịrị ekwesị maka usoro ea ch.
Usoro casset na-ekewa elu, mgbe ụfọdụ a na-akpọ cassette stacks, site na usoro ratchet, a na-akpọ 'freewheel'. The freewheel na-wuru n'ime ehiwe ahu. Freewheels na-ekwe ka wiil ahụ na-ebugharị ma na-aga n'ụsọ mmiri mgbe ị kwụsịrị ịkụcha.
Mpụga nke freewheel ahụ nwere akara ntanye nke dabara na ụkpụrụ nke ezé cassette. Mostkpụrụ a na-ahụkarị freewheel bụ nke ọtụtụ ndị nrụpụtara na-akọrọ Shimano, SRAM, Sun Race na ndị ọzọ. Aglọ ọrụ Campagnolo freewheel nwere okpukpu asatọ ma nwee akara ngosi pụrụ iche nke na-adabaghị na ụdị ndị ọzọ.
Eji circlip rụọ ọrụ na nchịkọta katrij. Ọtụtụ circlips nwere akara ntanetị 12, mana enwere ndị ọzọ. E nwere ihe abụọ a na-ejikarị emegharị circlip: a pụrụ ịchọta otu na usoro Campagnolo na nke ọzọ nwere ike ịchọta na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ; akwa akwa na ngwaọrụ yiri nke a mana enweghi mgbanwe.
Nke a bụ otu esi ahọpụta ihe eji eme mkpọchi n'ụzọ dị mfe: Lee ụdị nke azụ azụ azụ Ọ bụrụ na derailleur n'ihu bụ akara Campagnolo, ị ga-achọ BBT-5 / FR-11. Ọ bụrụ na onye derailleur sitere na akara dị iche, gụnyere Shimano, SRAM, Sun Race, ma ọ bụ ndị ọzọ, ị ga-achọ otu n'ime usoro FR-5 nke ngwaọrụ dịka FR-5.2, FR-5.2G, na ndị ọzọ.
Enwekwara sistemụ freewheel pụrụ iche akpọrọ XD Driver nke ụfọdụ SRAM 11- na 12-ọsọ cassette na-eji nwere ọtụtụ ngwa gia. Yiri cassettes ndị ọzọ, ezé ezé dị 12 nke anụ ọhịa na nke pere mpe. The freewheel ka shortened ezé na mpụga eri.
Uwe ejiri eri na casset na-eme dịka mkpọchi. A na-ejikọ cassette a na otu n'ime ihe eji eme mkpọchi Park FR-5. Enwekwara ụfọdụ sprockets na-eji usoro freewheel eme ihe.
Ọtụtụ na-eji mpụga notched circlip. Jiri ihe nkedo circlip dika Park Park HCW-17 iji tinye ma wepu. Ugbo ala ochie nwere ike enweghi circlip di iche.
Ndị a chọrọ ụtarị abụọ iji kpọchie cassette sprockets Ihe izizi na-eje ozi dị ka mkpọchi maka gia ndị ọzọ. Maka iwepụ casset na nrụnye, lee isiokwu a. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere usoro cassette, freewheel bụ teknụzụ ochie.
The freewheel bụ usoro nke nwere onwe ya nke nwere usoro ratchet. Nke a na-eme ka wiilị a na-ebugharị na-aga n'ihu ma na-eme ka Freewheel body h Aben dị n'ime ya wee jidesie ya ike na eriri azụ azụ. A na-ahụkarị freewheels na ịnyịnya ígwè ochie, na ịnyịnya ígwè ọhụụ ọhụrụ na otu ọsọ na igwe BMX.
A na-atọpụ freewheels na ngwaọrụ mwepụ nke na-etinye ihe eji arụ ọrụ na ahụ kachasị freewheel. Emeputa nwere a dịgasị iche iche nke ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị aghụghọ na Park Ngwá Ọrụ nwere ngwá ọrụ maka ọtụtụ freewheels. Agbanyeghị, a ga-enwe ụdị ochie ochie nke enweghị ngwa ọrụ na-adọba ụgbọala.
Kedu ihe bụ scissor kicks
Etu ị ga-esi amata ngwa ọrụ ịchọrọ: Chọọ maka onye na-ejide ngwa ọrụ na freewheel. Enwere ma ọ bụ ụdị spline ma ọ bụ njikọ ụdị ngwa mgbakwunye. Y’oburu na inwere udiri spline, guo onu ogugu.
Ọ bụrụ na enwere splines 20, jiri FR-4. Ọ bụrụ na e nwere splines 12, lelee akara nke nweere onwe ya. Ọ bụrụ na ọ bụ mpempe igwe efu efu nke Falcon, jiri FR-7.
Ọ bụrụ na ọ bụghị nke a Falcon ika freewheel, tụọ na mpụga dayameta nke ngwá ọrụ njide. Ọ bụrụ na ọ tụọ ihe dịka 23mm, ị na-eji FR-1.3.
Enwere ụkpụrụ Shimano ochie nke ihe dịka 20 mm. Park Tool anaghị enye ngwá ọrụ maka freewheel a. Ọ bụrụ na ị nwere njiri mara ọkwa mara, gụọ ọnụ ọgụgụ ọkwa ahụ wee tụọ dayameta site na mpụta mpụta gaa na mpụga.
Ọ bụrụ na ọhụụ abụọ Onye na-ejide ngwá ọrụ nwere dayameta nke ihe dịka 25 mm, jiri FR-2. Ọ bụrụ na e nwere anọ notches na ngwá ọrụ njide bụ mkpokọta 24mm ke dayameta, jiri fr-3. Ọ bụrụ na enwere ọkwa anọ na onye na - ejide ngwa ọrụ ihe dịka 40mm n’obosara, jiri FR-6.
Ọ bụrụ na enwere ọkwa anọ na onye na - ejide ngwa ọrụ ihe dịka 32mm n’obosara, jiri FR-8. Maka usoro iji wepu ma wụnye freewheels, lee isiokwu a usoro cassette na freewheel, ọ bụrụ na ị ka q biko hapụ ha na nkọwa ndị dị n'okpuru. Maka ozi ndị ọzọ na katrij ọ bụla na ngwa ọrụ freewheel, gụnyere ozi ndakọrịta kachasị ọhụrụ, gaa na Parktool.com.
Daalụ maka ikiri ihe enyemaka enyemaka Park Park a. Anyị na-agbakwunye isiokwu na isiokwu ebe a na YouTube na weebụsaịtị anyị na ParkTool.com.
Biko nye edemede a aka ma ọ bụrụ na ọ nyere gị aka. Ma n'ezie, denye aha na ọdịnaya ParkTool kachasị ọhụrụ.
Kedu ka ị ga-esi gbanwee ịgbanye igwe kwụ otu ebe?
Dị mfe: Ngwongwo gia n'akụkụ aka ekpe nke akaswitchesn'agbata ígwè ndị dị n'ihu (site na nnukwu na obere na azụ), ihe nkedo na nriswitchesn'etiti n'azụ azụ.
Kedu ihe dị iche n'etiti Shimano XT na Deore XT?
Ihe eji eme ihe na ibu ibu
Iji maa atụ,UgochukwuCassette, nke mejupụtara kpamkpam nchara, gaa na cassette XTR, nke mejupụtara ntanye atọ nke aluminom, nchara anọ na titanium ise, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gram 200.NkeNdị haptics na-eritekwa uru site na ihe ndị dị elu.
oyi ịgba ígwè okpu
Gịnị bụ XT circuit?
ShimanoXT-Shift lever (n'akụkụ aka nri)
Ngwongwo gia nkeXT-Group na-enye ohere ka ị gbanye ihe ngwangwa anọ ka ọ gbanye ya site na iji otu lever na pịọnụ buru ibu, yabụ usoro nha dị obere. Ọzọkwa site na nkwụsị nke lever, a na-eme ka ihe kachasị elu jumps abụọ rụọ obere pinion, ya bụ iji kwuo nha oke.13. 2019.
Kedu agbụ nke cassette?
Chain: Ndị ọzọ sprockets nakasetibụ, dị warara karịa ka ọ kwesịrị ịdịChainibu. Otú ọ dị, otu na-emeChain, nke dị otu nzọụkwụ karịa ọkọlọtọ, enweghi nsogbu ọ bụla. Yabụ ị nwere ike ịnwe '9-fold'Chainjiri okpukpu asaa ma ọ bụ okpukpu asatọkasetiwere ma ọ bụ okpukpu iriChainna usoro 9-fold.
Kedu ka ị ga-esi gbanye mgbagharị na igwe ịgba ọsọ?
iheỌrụ ịgbanweesite na ibanye onye nlere nke gearshift n'ime (na uzo abuo: elu na ala) a na-eme ka eriri gia wepu ya site na ichikota uzo ozo n'ime otu uzo. Nke a pụtara na a na-etinye agbụ ahụ na obere obere osisi na-esote ya ma ọ bụ na obere ihe ntanetị.
Kedụ ka ị ga-esi gbanwee okirikiri sekit?
N'iji aka ekpe ị na-ebugharị derailleur n'ihu maka oghere 2 n'ihu, ya bụ na i nwere 10 gears (2 ugboro 5). Ọ dị mkpa ka ị na-agbanye ụkwụ mgbe ị na-agbanwe mgbanwe (enwere ike imegharị ya), mana ENWEGH pressure nrụgide ọ bụla.26. 2017.
Kedu nke kachasị mma ma ọ bụ XT?
Dịka e kwuworo, isi ọdịiche dị n'etiti ahịrị ndị ahụ bụ anwụ ngwa ngwa. Ya mere, Shimano na-echeUgochukwuXTR usoro nwere oke dị elu karịa nke ahụXT-Nkesa. OnyeUgochukwu-Ndụ juru ọbụna na-eme ihe kachasị mkpa banyere ike na nkwụsi ike.
Kedu mgbe Shimano XTR Shadow tinyere na-apụta?
XTR Shadow Plus azụ mech ga-adị site na June. A ka kwenye ọnụahịa UK. Ihe mgbakwunye ọhụrụ na XTR Dyna-Sys drivetrain bụ RD-M985 Shadow Plus rear derailleur.
Kedu ka Shimano Shadow tinyere azụ derailleur si arụ ọrụ?
Onyinye gbakwunyere Derailleur Ihe ngosi gbakwunyere derailleur imewe a spring-kwajuru ala pole oghere na ike ga-ekpochi na ihe na / anya mgba ọkụ. Mgbe mkpuchi SHADOW gbakwunyere na ọnọdụ na-apụ apụ, usoro ahụ na-agagharị kpamkpam, dịka ọkọlọtọ nke ọkọlọtọ nwere oghere eji abanye mmiri.
Kedu nke kacha mma maka Shimano Shadow gbakwunyere?
Mgbe ị na-apụ, ọnọdụ azụ na-enyekwu slack slack na ọ bụ ọnọdụ kachasị mma mgbe ị na-ewepu ma ọ bụ wụnye ụkwụ azụ gị. N’etiti usoro ndò SHADOW PLUS bụ nke a na-ebupute mmiri, nke a na-eji agbụ agbụ.